novembre 2017 – filazantsaramada
NY TENY DIA ANDRIAMANITRA
Mila mitandrina tsara isika kristiana ny amin’ny teny izay aloaky ny vavantsika fa indraindray ataon’i Satana fitaovana hamonoana ny fanahin’ny hafa izany. « Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena, ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. » Ohabolana 25:11 Ny ambaran’ity Soratra Masina ity eto dia tena zavatra sarobidy, poma volamena, ny teny atao amin’ny antony: […]
Publié parfilazantsaramada novembre 23, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY TENY DIA ANDRIAMANITRA
« Fa tsy fantantsika izay vavaka tokony ataontsika; fa ny Fanahy no mifona ho antsika amin’ny fitarainana tsy azo tononina. » Romana 8:26 Raha mamaky ny Soratra Masina isika dia mbola ny Fanahy no manambara amintsika izay tena tiany ambara. Raha ny maha olombelona antsika dia tsy mahatakatra ny saindalin’Andriamanitra isika, ary raha izany dia tsy haintsika […]
Publié parfilazantsaramada novembre 16, 2017 novembre 16, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY AO AMIN’I KRISTY JESOSY
Publié parfilazantsaramada novembre 10, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY RAN’NY ZANAKA
« Jesosy nijery azy ka nanao hoe: raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba tahaka izany amin’Andriamaanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra. » Marka 10:27 Teny nataon’i Jesosy ato amin’ity bokin’ny Marka 10 ity izany, niteny izy hoe: « sarotra ny hidiran’ny mpanankarena amin’ny fanjakan’ Andriamanitra ». Hoy ny soratra eto hoe raha amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada novembre 3, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.